Hindise sharciyeed xasaasi ah oo hor yaalla Baarlamanka DF & arrin ay tahay in lagu eego | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Hindise sharciyeed xasaasi ah oo hor yaalla Baarlamanka DF & arrin ay...
Collection of pesticides, including DDT, that were still in use by some farmers in the 1970's. Photo was taken at a Kansas farm in 1976.
(Muqdisho) 27 Okt 2020 – Waxaa Baarlamanka DF hor yaalla hindise sharciyeed cusub oo la yiraahdo ‘Adeegyadda Baaritaanka Beeraha Soomaaliyeed’ kaas oo ka yimid dhanka Wasaaradda Beeraha DF Somalia.
Yeelkeede, Xildhibaanno fara ku tiris ah oo muujiyey inay arrintan wax ka fahamsan yihiin ayaa soo jeediyey in hindisahan lagu noqdo, waxaana Xildhibaannadaa ka mid ah Cabdullahi Gaafow Maxamuud, kaasoo iftiimiyey in Wasaaradda xeerkan soo agaasintey aysan tixgelin siinin ammaanka Qaranka dalka.
“Shircigaan qolada ka soo shaqeysay ma aysan tixgelin dhibaatada uu amniga ku hayo ee walxaha lagu bacrimiyo beeraha ee dalkeenna la keeno,” ayuu yiri Xil. Gaafoow oo ah Taliyihii hore ee NISA.
Ha yeeshee, arrinta uu Gaafoow ka dhawaajinayo ayaa kaliya ku fooggan dhanka amaanka jireed ee istaraatijiga ah, sida uu isagu sharraxay.
“In kiimikadaas dalka laga mamnuuco ayey aheyd, ama gacan amni ah lagu haayo, maadaama aan laga maarmi karin bacriminta,” ayuu daba dhigay isagoo iftiimiyey in Shabaabku ay suntan lafteeda ku daraan waxyaabaha ay qaraxyada ka sameeyaan.
Wuxuu kaloo soo jeediyey in loo yeero madaxda NISA si ay ula socdaan halista ka jirta arrintan, isagoo soo jeediyey in aan hindisahan xeer laga dhigin kahor inta arrimahaa la iska waafajinayo.
Yeelkeede, waxaa jirta arrin kale oo iyadu amaanka cunto iyo caafimaad ee dalka halis ku ah waana maaddooyinkan beeraha lagu bacrimiyo laftooda oo ay ku jiraan kuwo 50 sano kahor caalamka laga mamnuucay sida DDT oo laga qaado cudurro halis ah sida kansarka, balse weli Somalia la geeyo maadaama aanay jirin cid la socota.
Sidoo kale, Somalia wax xeer ihi ugama degsana cuntooyinka iyo miraha hidde-sidkooda la macmalay sida GMC iyo GMO, kuwaasoo iyaguna halis badan ku haya dalal badan iyo dadkooda, mana muuqato baraarugsanaan ku wajahan in beeraha dalka laga ilaaliyo abuurka noocaas ah.
Previous articleFaransiiska oo iyaga oo is yara jilcinaya ka hadlay go’aanka ay ka qaateen badeecada ka imanaysa Turkiga
Next articleDalka Turkiga oo gawaari gaashaaman oo aan qaaradda horay looga dalban ka iibinaya dal Afrikaan ah + Sawirro